Hubka Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma hubo waxaad ka aaminsan tahay arrintaas, laakiin ma doonayo inaan wajaho libaax duurjoog ah oo aan badbaadin lahayn! Jidhkani aad u xoog badan, oo la duugay isla markaana leh cillad weyn oo dib u milicsan kara oo ka goyn kara xitaa maqaarka ugu adag iyo xoogaa aadan dooneynin inaad aad ugu dhowaato - libaaxyadaani waxay u diyaarsadeen inay noqdaan kuwa ugaadhsadayaasha ugu halista badan Afrika iyo kuwa kale Inay ka tirsan yihiin qaybaha dhulka.
Si kastaba ha noqotee, waxaan leenahay cadow ah ugaarsade aad u qadhaadh. Xitaa waa inaan wax ka qabanaa isaga maalin walba. Baybalku wuxuu shaydaanka ku tilmaamay sidii libaax ku soconaya dhulka oo raadinaya wax ugaarsanaya (1 Butros 5,8). Waa nin xeelad badan oo xoog leh raadinta dhibbanayaashu tabarta daran iyo kuwa aan caawinta lahayn. Si la mid ah libaax, inta badan ma garanayno goorta iyo meesha lagu garaacayo Malaka soo socda.
Waxaan xasuustaa markii aan ahaa cunug waxaan uga tagay majaajillo sheydaan lagu sharraxay sida kartoon jilicsan oo qurux badan oo leh xariif jilicsan oo dabacsan, dabada xajiyaha xafaayadda, iyo tuugta. Ibliisku aad buu ugu farxi lahaa inuu na arko maxaa yeelay waa mid xaqiiqada ka fog, oo rasuul Bawlos wuxuu nooga digaya Efesos 6,12 inaannaan la dagaallameynin hilibka iyo dhiigga, laakiin aan ka hor imaaneyno awooda mugdiga iyo iyaga Quruxleyda ku nool adduunkan mugdiga ah.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaanan u nugul nahay awoodahan. Aayadda 11aad waxaan ka akhriyi karnaa xaqiiqda ah inaan leenahay hub inaga daboola madax ilaa cirib isla markaana awood u siiya inaan u diyaar garoobo mugdiga.
Hubka Ilaah ayaa loo tolay
Waxaa jira sabab wanaagsan oo loogu magacdaray "hubka hubka Eebbe". Waa inaanaan waligeen u qaadin inaan shaydaanku kaga adkaan karno xoogheena!
Aayadda 10aad waxaan ka akhrinay inaynu ku xoog badnaanno xagga Rabbiga iyo xoogga xooggiisa. Ciise Masiix ayaa mar horeba shaydaanka naga adkaaday. Isaga wuu isku dayay laakiin kama uusan dhiibin. Iyada oo loo marayo Ciise Masiix, annaguna waan iska caabin karnaa shaydaanka iyo jirrabaaddiisa, oo waxaan Kitaabka Quduuska ah ka akhrin doonnaa inaynu nahay suuradda Ilaah (Bilowgii 1:1,26). Isagu wuxuu noqday hilib laftiisa oo ku dhex noolaa (Yooxanaa 1,14). Wuxuu nagu amrayaa inaan xidho hubkiisa si aan uga adkaano sheydaanka caawimaaddiisa (Cibraaniyada 2,14): "Maadaama carruurtu ay hadda yihiin hilib iyo dhiig, isna sidoo kale isaguu u aqbalay si isku mid ah in dhimashadiisa uu kala wareego qofkii xukunka, kan Ibliiska ah" .Haddii aan wax ka qabanno la macaamilka shaydaanka, waa inaan gashanaa hubka buuxa ee Eebbe si aan si buuxda u ilaalino nuglaanta aadanaha.
Hubkii oo buuxa
Hubkii ilaahay ayaa inaga badbaadiya marmarka!
Mid kasta oo ka mid ah qaybaha lagu sharaxay Efesos 6 waxay leedahay macne labanlaab ah. Dhinac ahaan, iyagu waa waxyaalaha aan ku dadaalno in aan ku dadaalno, dhanka kale, iyaguna waa waxyaalaha lagu gaari karo dhammaystirka Masiixa iyo bogsiinta uu keeno.
"Markaa waa hubaal, runtiinnu ku xidhan yahay dhexdaada" (Efesos 6,14)
Masiixiyiin ahaan, waxaan ognahay inay tahay inaan runta sheegno. Laakiin inkasta oo ay muhiim tahay in run la sheego, daacadnimadayadu weligeed kuma filna. Masiixu laftiisu wuxuu yidhi waa jidka, runta iyo nolosha. Markaan isku xirno suunka, annaga ayaa isku hareereysan. Si kastaba ha noqotee, maahan inaan annagu tan samayno maxaa yeelay waxaynu leennahay hadiyadda Ruuxa Quduuska ah oo runta noo caddeeya: “Laakiin haddii Ruuxa runta ahu yimaado, wuxuu idinku hoggaamin doonaa runta oo dhan” (Yooxanaa 16,13).
"Lagu dhammeeyay taangiga caddaaladda" (Efesos 6,14)
Waxaan had iyo jeer u maleeyay inay lagama maarmaan tahay in la qabto camal wanaagsan iyo in la ahaado qof xaq ah oo naftaada ka difaaca shaydaanka. Inkasta oo anaga oo ah Masiixiyiin ahaan laga filayno in aannu ku dadaalno heer anshaxeed sarreeya, haddana Ilaah wuxuu yidhi xaqnimadayada, xitaa maalmahayaga ugu wanaagsan, waa dhar quruxsan (Ishacyaah 64,5). Rooma 4,5 wuxuu sharraxayaa in maahan camalkeena laakiin aan aaminsanahay ka dhigno mid xaq ah Markii la wajaho xaqnimada Masiixa, sheydaanka kaligiis ma doorto inuu cararo mooyee. Markaas isagu ma haysto jid uu ku sumoobo qalbiyadeenna sababtoo ah waxaa ilaaliya haanta cadaaladda. Markii Martin Luther la weydiiyay sida uu uga adkaaday shaydaan, wuxuu yidhi, "Hagaag, markuu albaabka gurigayga garaaco oo uu weydiiyo cidda halkaas ku nool, Sayid Ciise wuxuu albaabka u tagayaa oo yidhi," Martin Luther halkan buu joogaa noolaa laakiin wuu ka guuray. Waxaan ku noolahay halkaan hadda. Haddii Masiixu qalbiyadeenna buuxiyo oo difaaco hubkiisa caddaaladda, sheydaanka ma heli doono marin.
"Lugaha La Dhigay, Diyaar u ah Istaag Injiilka Nabadda" (Efesos 6,15)
Kabaha iyo kabaha ayaa cagahayaga ilaaliya marka aan ku dhex soconno wasakhda dunidan. Waa inaan isku daynaa inaanan cidna dhicin. Taas waxaan ku sameyn karnaa oo keliya Masiixa. Injiilku waa warka wanaagsan iyo farriinta uu Masiixu inoo keenay; runtii war wanaagsan, kafaaraggud aawadiis ayaa naloo dhawray oo loo badbaadiyey. Waxay noo oggolaaneysaa inaan helno nabad ka weyn fahamka aadanaha. Waxaan leenahay nabad anagoo og in cadowgeenna la jabsaday oo aan isaga ka difaacnay.
Waxkasta oo ka sii badanna, qaado gaashaanka iimaanka (Efesos 6,15)
Gaashaarku waa hub difaac ah oo inaga difaacaya weerarada. Waa inaan waligeen rumeysan awoodaheena. Tani waxay u ekaan doontaa calaamadaha foornada aluminium. Maya, iimaankeenu waa inuu ku salaysnaado Masiixa maxaa yeelay isagu mar hore ayuu shaydaanka ka adkaaday! Galatiya 2,16 waxay mar labaad si cad u caddaynaysaa in shaqooyinkeennu na ayan difaaci karin: “Laakiin waxaan ognahay inay dadku ku garsoorin xaqnimada sharciga, laakiin inay rumaystaan ​​Ciise Masiix, innaguna innaguna waxay ku jiraan xagga rumaysadka. Waxaa yimid Ciise Masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka xagga Masiixa ee ma aha xagga shuqullada sharciga. maxaa yeelay, ninna laguma caddeeyo shuqullada sharciga ". Rumaysadkeenu wuxuu ku jiraa Masiixa oo keliya, iimaankeenuna waa gaashaanka.
"Koob koofiyadda badbaadada" (Efesos 6,17)
Koofiyadda madaxa ayaa ilaalinaysa madaxdeena iyo fikirradeenna. Waa inaan sameynaa wax kasta oo aan awoodno oo aan ka ilaalinno nafteenna sharka iyo fikradaha foosha xun iyo riyooyinka. Fikradaheena waa inay ahaadaan kuwo fiican oo saafi ah. Laakiin camalku way ka fududdahay in la xakameeyo fikirka, oo sheydaanka ayaa xirfad weyn ku leh qaadashada runta iyo qalloocinta. Wuxuu ku faraxsan yahay markaan ka shakinno badbaadadeenna oo aan aaminsanahay inaynaan u qalmin ama inaan wax u qabanno. Laakiin annagu ma lihin inaan shaki galno maxaa yeelay badbaadadeenna waxay ku jirtaa iyo xagga Masiixa.
"Seefta Ruuxa, oo ah erayga Ilaah" (Efesos 6,17)
Ereyga Eebbe waa Kitaabka, laakiin Masiixa sidoo kale waxaa lagu sharaxay inuu yahay Ereyga Eebbe (Yooxanaa 1,1). Labaduba waxay naga caawinayaan inaan iska difaacno shaydaanka. Ma xasuusan kartaa marinka Kitaabka Quduuska ah ee sharxaya sida Ibliisku isku dayay Masiixa cidlada dhexdeeda? Malaakii kasta wuxuu soo xiganayaa Ereyga Eebbe Ibliiskuna markiiba wuu diiday (Matayos 4,2: 10). Ereyga Eebbe waa seef laba af leh oo uu inoo diyaariyay si aan u aqoonsanno dariiqooyinka khiyaanada leh ee sheydaanka oo aan uga difaacno naftooda.
La'aanti Masiixa iyo hagidda Ruuxa Quduuska ah, ma aanan fahansan karin Kitaabka Quduuska ah gebi ahaanba (Luukos 24,45). Hadiyadda Ruuxa Quduuska ahi waxay awood noo siisaa inaan fahamno Ereyga Eebbe, oo had iyo goor ka hadlaya Masiixa. Waxaan haysannaa hubka ugu awooda badan gacmaheena si aan uga adkaano shaydaanka: Ciise Masiix. Aad ha u walwaalin marka aad maqashid ibliis oo ooya. Waxay u muuqan kartaa awood, laakiin si wanaagsan ayaa loo ilaaliyaa. Rabbigeenna iyo Bixiyahayagu mar hore ayaa na siiya hub si loo isaga difaaco: Xaqdiisa, Cadaaladdiisa, injiilkiisa Nabadda, Iimaankiisa, badbaadadiisa, Ruuxiisa, iyo Eraygiisa.
waxaa qoray Tim Maguire